परीक्षणबाट पुष्टि भएकै छैन, खोप बनेको दावी कसरी गर्न सक्छु ? - नेपाली आवाज परीक्षणबाट पुष्टि भएकै छैन, खोप बनेको दावी कसरी गर्न सक्छु ? - नेपाली आवाज
कोरोनाविरुद्धको खोप नेपालमै बन्यो भनेर यतिखेर निक्कै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । कतिसम्म भने, त्यो खोपको बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै पनि चासो दिएको छ भनिँदैछ । हेटौंडास्थित बन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. ललितकुमार लाल दासले उक्त खोप तयार गरेको भनेर प्रचारमा आइरहेको छ । वास्तवमा, कुरा के हो ? साँच्चै नै खोप बनेकै हो त ? यसबारेमा ‘खोप बनाउने’ भनिएका प्रोफेसर दास आफैं चाहिँ के भन्छन् ? प्रस्तुत छः उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित उतार ।
साभार :- रातोपाटी डटकमबाट